Ukwahlukanisa kupheliswa ngokusemthethweni ubudlelwane bomtshato phakathi kwabatshatileyo. Ukwahlukana ngoxolo, xa indoda nomfazi bengavumelani kwimvume kunye kwaye abanalo ibango okanye izinto zokuziphatha.
Kukho ukwahlukanisa okunxulumene neengxabano, ukuxabana kunye nezilingo. Kodwa kwimeko yokuqala neyesibini, umbuzo wokulungiselela ukuqhawula umtshato uqakatheke kakhulu kumabini omabini. Ekubeni ukuqhawula umtshato kukuxinezelekile kungekhona kuphela kubafazi, kodwa nabantwana.
Ukwahlukana ngumbono kwi-prism yembali.
Ngokomlando, umtshato esitfini senkolo nayiphi na inkolo yayicatshangelwa ingcwele kwaye ingabonakali, kwaye umtshato wawungakhuthazwa ngokusemgangathweni, kwaye waqwalasela isono esikhulu. Wayevunyelwe kuphela ekungabikho kwabantwana, kwamanye amazwe, ukungcatsha kwabatshatileyo kwakuyizathu esivakalayo. Kwilizwe lethu lezantloko, ilungelo lokuqhawula kunye nokulungiswa kwalo lalifumaneka kuphela kumntu - intloko yentsapho. Ngoko, umzekelo, kwakuseNdiya yakudala, iYiputa neBhabheli. KwaseRoma yakudala phantsi kweemeko ezithile abaqalisi babeba ngumyeni nomfazi. EFransi, ixesha likaNapoleon Bonaparte, ithuba lokuqhawula ngaphandle kokumangalelwa luchazwe. Namhlanje, umqalisi wokutshatyalaliswa komtshato kunye nokulungelelaniswa kwawo kungaqala ngakuphi na icala, mhlawumbi ngeendlela zokuthula okanye ngokusebenzisa ukuncediswa kwezomthetho.
Izizathu zokutshatyalaliswa kwemitshato.
Izizathu zokuqhawula umtshato - zihlukeneyo kwaye zikhohlakele, ezahlukileyo phantsi kweemeko ezithile: ukungabikho kokuvisisana okanye abantwana, ukukrexeza, iingxaki zemali okanye ezingokomoya, ukungqinelani kwiinjongo zobomi. Ukuqhekeka ngokomzwelo kuboniswa kwinto yokuba abatshatileyo baya kunzulu emsebenzini, bathanda uhlobo oluthile lokuzilibazisa, baneenkampani ezihlukeneyo kwaye abanxibelelwano oluncinane. Kancinci, ukuhlambalaza kunye neentlanzi ziqala kwaye ukuba indoda kunye nomfazi abafumani isisombululo esiphezulu kwinkinga, ngoko kuphela into ehlalayo - umtshato. Kwaye kulo mzekelo, akuyona inkqubo yokuqhawula umtshato ebalulekileyo, kodwa indlela yokulungiselela umtshato, indlela yokusindisa imiphumo yayo.
Xa iindaba zomtshato ziza ...
Incoko yokuqala engalindelekanga malunga nokuphazamiseka kobudlelwane iya kubangela ukutshitshiswa malunga neqabane elilahliwe. Indoda okanye umfazi angakwazi ukuwela kwi-stupor kwaye akakwazi ukuqonda oko kwenzekayo. Ngaloo ndlela, umntu uzama ukuqokelela amandla kunye nokulungiselela ilingo elizayo. Endaweni yokutshatyalaliswa kamva ithemba ukuba akusiyo yonke into elahlekileyo kwaye umtshato ungagwenywa - indoda ayikholelwa yinto eyenzekayo. Kwaye kuza ukuxinezeleka, okungekho kuphela engozini kwimpilo yenyama kunye neyomoya yeqela eliphumayo, kodwa kwanokulimaza inhlalakahle yengqondo yabantwana. Kwaye kuphela, xa ushiya eli lizwe, unokucinga ukuba ulungiselele ukuqhawula umtshato kwaye ungaqala ukwakha omnye ubomi.
Ukuze ulungiselele ukuqhawula umtshato kwaye usinde, ukugcina, ngokusemandleni akho, impilo yengqondo kunye nempilo, kuyimfuneko ukulandela imigaqo ethile: umntu akufanele aphile ekhumbula imihla yakudala, ukufumanisa ubudlelwane kunye nomlingane, ukumnyama phambi kwabanye okanye ukuzama ukubuyela; Akufanele ugijime kwiindawo zokuzonwabisa kwaye uqale ulwalamano olutsha; ungazibandakanyi kotywala okanye ezinye izinto ze-psychotropic; Kungcono ukukhokelela ubomi obulinganisiweyo nokuzola, kufuneka ulale, wenze i-psychoanalysis kwaye uhlale uphulaphule.
Khangela ixesha elihle.
Ukuphuculwa kwenhlalakahle yengqondo ekulungiseleleni umtshato kunokufuna ukufumana izibonelelo kule drama. Amava okuphila aya kukunika ulwazi lobomi obuzimeleyo kwaye akayi kuvumela ukwenza loo mpazamo.
Ukuba nenxenye kunye nomfana xa kungekho uthando phakathi kwakho
Indlela yokwahlula ipropati ngokufanelekileyo xa kunqatshelwe umtshato?
Unokusindisa njani intsapho kwiqhawulo lomtshato?
Indlela yokuphoqa umntu ukuba ahlukanise?
IHososope ngo-2015 kaLeo
Ukunakekelwa kwesisu ngexesha lokukhulelwa
Isondlo kunye nolawulo lwabantwana ukususela kwiminyaka ukuya ezimbini
Umntwana unomkhuhlane ophezulu - wenzeni?
U-Julia Savicheva wadumala abalandeli ngamazwi nge talente yeBuvoy
I-Horoscope ngo-2010 ibe ngumqondiso we-zodiac weCapricorn
Unokukhetha njani ijekethi kumfazi okhulelwe?
Uramaki nge salmon kwi sesame
Indlela yokulahlekelwa isisindo emva kokubeleka ukuba uncedisa